IINYANI EZI-16 EZINGQWABALALA MALUNGA NOKUDIBANA NGOKU KUFUNEKA UJONGANE NAKO - UNXIBELELWANO
Iinyani ezi-16 ezingqwabalala malunga nokuDibana ngoku kufuneka ujongane nako
Ukuthandana kwale mihla kuyinkimbinkimbi. Inokuba yiyo yonke into kwaye akukho nto yonke ngexesha elinye. Ngumnyango ojikelezayo wabantu abanolindelo. Ubaleka ungenanto ukuba awuqhubeki. Nazi iinyani ezingathandekiyo malunga nokuthandana kwale mihla okuya kukunceda ujongane nenyani kwaye uzilungiselele okungalindelekanga.
Jongana nayo. Nokuba umntu ubonakala ethembekile kangakanani kunomvuzo omkhulu ngokuxoka xa uqala ukudibana. Ukuba awuyamkeli yonke into oyivayo njengenyaniso, uya kuzinika ixesha. Emazantsi emgceni, unokuzibona ngokwakho inyaniso, ebhetele ngakumbi kunamazwi.
Ubuxoki obukhulu. Ubuxoki obumhlophe. Uyayenza. Lumka, nangona kunjalo, ubukhulu bobuxoki bakho, kokukhona kunokwenzeka ukuba uthandane nomntu ofihla ubuxoki obukhulu ngakumbi. Ukuthintela oku, ukuthandana nomhla omncinci, kunye nokuseka ubudlelwane obusondeleyo nabantu abanyuliweyo ofuna ukubazi. Eli nqanaba lokuthuthuzela liya kukwenza uvule ngakumbi kwaye uthembeke.
Ukuthumela imiyalezo kuthetha ukuba usezantsi kuluhlu lwezinto eziphambili.
Imiyalezo ebhaliweyo inokuthi itshintshe ukuthandana kwale mihla ibe mandundu. Yakha iingcinga, ithemba lobuxoki, kunye nokungaqondani okwenza ubunzima kunxibelelwano. Kunentsingiselo ukuva ilizwi lesithandwa sakho kwelinye icala. Ukuhamba, ukuhamba kunye nokuthandabuza kukuxelela okungakumbi malunga nomoya wakhe, ubuntu kunye nento esengqondweni yakhe.Intengiso
Ungaluthatha njani uncomelo
Akukho mntu uza kuza umsiki wecookie acocekile. Wonke umntu unecala elibi okanye elimnyama nokuba bayayivuma okanye hayi. Ndiyathemba ukuba udibana nomntu owaziyo ukuba leliphi icala lakhe elimnyama kuba uya kuba nemfesane xa ubonakalisa eyakho. Wonke umntu othandana naye ungutitshala. Ukuba ucinga ngale ndlela, akukho buhlobo bumosha.
Zininzi iindlela onokukhetha kuzo.
Ukususela online ukuthandana isantya ukuthandana, kulula ukuziva ngathi ukuthandana mihla ngumsebenzi osisigxina. Musa ukwenza yonke into. Fumana ezona zilungele ubuntu bakho. I-extrovert ingabuthanda ubomi bobusuku kunye nokudibana nabantu edolophini. I-introvert inokukhetha ukuthandana kwi-Intanethi okanye ifomathi ebunjiweyo, ebekiweyo njengokuthandana ngokukhawuleza.
Uya kuhlawula kakhulu ukukhathazeka komnye umntu komntwana.
Ukuba kukho umothuko ongasonjululwanga ebuntwaneni, zilungiselele ukuba uthandane ukuze ube nesiphithiphithi. Ukuba uhlangabezana nomntwana omdala owenza ngokungathi ubambekile ezintandathu, endaweni yama-36, ngenxa yokuba engakhange aqhubeke ngokweemvakalelo kwinto eyenzekileyo, thatha inyathelo lokubuyela umva. Misela imida kwangethuba. Kungumsebenzi wakho ukuzikhusela.
Kwakhona kwakhona. Uyaziphoxa rhoqo, ulindela njani ukuba omnye umntu angakuphoxi? Funda ukuhlala unxunguphalo. Ukuba ulahla wonke umntu okuphoxayo, soze ufumane mntu.Intengiso
Ukuyeka ukutshaya ayisiyiyo inketho
Kuya kufuneka utshintshe.
Uyakufumana umntu othandana naye oza kugrumba zonke iimpawu zakho ezimbi. Cinga ngale nto ilungileyo. Iya kukunceda ukhule, uhambise kwaye wamkele iinxalenye zobuntu bakho obuzilahlileyo. Ukuba udibana nomntu ngequbuliso onomdla wokubaleka ngobusuku bangoLwesihlanu endaweni yokubheja etywaleni luphuculo olukhulu kumgangatho wobomi bakho.
Asinguwe wedwa abathandanayo.
Kukho uxinzelelo oluncinci lokwenza xa ugcina oku engqondweni. Zilungiselele ngento yokuba umntu othandana naye anganomdla kwabanye. Yonke umdlalo olungileyo de ube uya kuba yedwa.
Imicimbi yakho iya kukhulisa kwaye yoyikise abantu kude (ekugqibeleni).
Abantu bayokulahla xa uyeka ukulunga. Ekugqibeleni, baya kubona iinxalenye zakho ezingafaniyo nezi bafuna zona. Yamkela le. Yeka ukuthatha ukhetho olwenziwa ngabanye abantu. Oku kunqabile ukuba kunanto yakwenza nawe. Sonke sihamba ngokwethu kwaye kufuneka sifumane abantu abaza kusisa apho.
Ukuba ngumnyango okanye ukuba yindoda ewe akuyi kwenza lula ukuthandana. Ngapha koko, ikubeka phezu kwesiseko. Ukuhlala kwisiseko somntu kuhle ukuba lilolo. Awunakho ukuba ngokwakho, okanye wabelane ngeemfuno zakho ezinzulu. Veza iimfuno zakho nokuba uyayithanda okanye akayithandi.Intengiso
Uthando olungenamiqathango lufunyanwa, aluzenzekeli.
Akukho mntu uza kukuthanda okanye akwamkele ngaphandle kwesango. Ukuba uthi uyayenza, awukamniki sizathu. Ekugqibeleni uya kuthi. Uthando olungenamiqathango lufunyanwa ngexesha kunye nokusombulula iingxaki. Kufuneka uzithembe ekunyanisekeni komntu othile kuwe, kwaye kunqabile oko. Nangona kunjalo, unokuhlala uzikhohlisa kuyo, ngokungayihoyi yonke into ayenzayo.
Awusoze umazi ngokupheleleyo umntu.
Kusoloko kukho icala lomntu aligcinayo emhlabeni. Kukho abazali abakhulise abantwana abahloniphekileyo, kwaye abasazi ukuba kutheni uJohnny omncinci ebambekile eMexico kwityala leziyobisi. Ukuthandana akuyiyo indawo yokwazana nomntu. Zazi wena kuqala, kwaye uthembe wena ukuba wenze izigqibo ezifanelekileyo. Shiya abanye abantu baziphendulele.
Ukuba awuyonto iphambili, isimemo sakho sokuchitha ixesha kunye siya kuba mhlawumbi.
Uya kwazi ukuba ubekwa kwindawo yokuqala ngokuwela kuluhlu. Ukuba ufuna ukuba ngu # 1 ungathathi mhlawumbi impendulo. Vumela omnye umntu enze umgudu wokuseta imihla. Oko kubonisa kakuhle ukuba unomdla kuwe.
Umntu ongakhathali kangako unamandla onke.
Oku kunzima xa uyintloko phezu kwezithende zomntu. Emva kweenyanga ezimbalwa zokuthandana, unomdla kakhulu. Ufuna omnye umntu azi. Libala. Kukwenza ubonakale ungaxabisekanga.Intengiso
Abantu bafuna abantu abanye abantu bafuna.
Yindalo yomntu; wonke umthetho wento yokunqaba. Musa ukuzenza ufumaneke kakhulu okanye wabelane kakhulu. Vumela omnye umntu abeke isantya kude nibe nobabini nifumana ibhalansi. Kungokwemvelo ukuba azive usithi shwaka, kwaye ufuna ukungena kwakhona.
Nika ubudlelwane. Ziphucule kuqala ukuze ubenamathuba amahle okuthandana. Nje ukuba uzive uphelele kwaye ugqibelele ngamalungu akho amabi kunye namabi, abantu baya kunamathela kuwe njengebhotolo kwi thowusti. Amadoda nabasetyhini banomdla kumaqabane akhululeke ngakumbi ukuba angobani. Yiyo loo nto amakhwenkwe amabi kunye namantombazana amabi ebonakala ngathi wonwabe.
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: http://www.flickr.com/photos/yourdon/3275748024/ ngeflickr.com
ithatha imvula ebandayo ilungele wena
Iimuvi ezilungileyo kakhulu onokuzibukela ngomhla
ujongana njani nabantu ongabathandiyo
ukuba ungabuya njani ngokukhawuleza ekusebenzeni
indlela yokwenza isigqibo ngekhondo lomsebenzi
ukwenza umthambo ukunciphisa amanqatha engalo
Ubomi Obunokubakho Ukucinga Ngendlela Eyakhayo Ukhuselo Lokusingqongileyo Ukuthengisa Amandla Omzimba